Man United oo soo bandhigtay tababaraha bedeli kara Ole Gunnar Solskjaer - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Man United oo soo bandhigtay tababaraha bedeli kara Ole Gunnar Solskjaer
Man United oo soo bandhigtay tababaraha bedeli kara Ole Gunnar Solskjaer
Manchester United ayaa haatan si fiican uga hooseysa boosaska lagu ciyaarayo tartanka Champions League ka dib markii ay barbaro 3-3 la galeen Sheffield United.
Natiijadaas ayaa la micno ah inay haatan fadhiyaan kaalinta sagaalaad ee Premier League, waxaana ay weli ka danbeeyaan Wolves, Sheffield United iyo Burnley.
Maamulaha kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa muddo dheer la hadal hayey wax ku saabsan mustaqbalkiisa Old Trafford..
Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, Starsport waxay eegaysaa cidda ay kooxdu u dooran karto bedelka Solskjaer.
Tababarihii dhawaan shaqada laga cayriyay ee Tottenham Pochettino ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahaa United isla markaana haatan diyaar ayuu u yahay inu bedelo Solskjaer.
Pochettino ayaa leh shaqsiyad maamul oo ka weyn Solskjaer ka dib shan sano iyo bar oo uu joogay Spurs.
Inkasta oo taasi ay haatan ku dhammaatay si lama filaan ah, haddana xiddiga reer Argentine ayaa weli loo arkaa mid ka mid ah maamulayaasha adduunka ugu fiican, waxaana la filayaa inuu dhawaan qabto shaqada koox sare.
Macalinka Shaqa la,aanta ah ee Allegri ayay u badan tahay inuu liiska kusoo baxo haddii Solskjaer la eryo.
Tababaraha reer Talyaani ayaa guulo muhiim ah ka soo hooyay kooxda Juventus, isla markaana 52 jirkan hore u sheegay inuu sida ugu fiican kaga faa,iideysto Anthony Martial iyo Marcus Rashford.
Brendan Rodgers ooh ore usoo maamulayay kooxda ay xafiiltamaan ee Liverpool, haatana ah tababaraha Leicester Brendan Rodgers wuxuu si lama filaan ah ugu soo baxay bedelka Solskjaer.
Si kastaba ha noqotee, guushii uu ka soo hooyey Celtic iyo waqtigiisa quruxda badan ee Foxes waxay la micno tahay in tababarahaan uu kusoo baxay mushar qaban kara Man Utd.
In kasta oo kooxdiisu Leicester ay haatan ka sarreyso United, Rodgers waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu doorto taariikhda ay leedahay Man Utd.
Previous articleAkhriso:- Sababta Kante u diiday in uu ku biiro Kooxda PSG
Next articleDhageyso:-Xildhibaan sheegay in Madaxweyne Farmaajo heshiis uga baxay